Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Martsa 2018 à 08:33
100 octets ajoutés , il y a 4 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Martsa 2018 à 19:37 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Martsa 2018 à 08:33 (hanova) (esory)
k (Nanao sora-madinika)
Tononina isan'andro, maraina sy antoandro ary hariva. Tononina koa izy eo an-dohafandrian'ny olona miala aina. Tononin'ireo tanora jiosy amin'ny fotoan'ny Bar Mitzvah (fahafenoan-taona ara-pivavahana: 13 taona). Voasoratra eny amin'ny vatakely firavaka (hebreo: תפילין / ''tefilin''; grika: φυλακτήριον / ''phylacterion'')'','' amin'ny takela-koditra malefaka mipetaka eny amin'ny handrina sy ny sandry havia'','' araka ny toromariky ny Deoteronomia. Voasoratra amin'ny takela-koditra apetaka eo amin'ny tolam-baravarana fidirana (dia ny atao hoe מזוזה / ''mezuzah'').
=== Ny fanekem-pinoan'nhyny Kristiana voalohany ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/813661"